Home AMERIKANINA STARS Luis Suarez Tantaram-pahaizana momba ny tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny "football genius" izay fantatra amin'ny anaram-bosotra "El Pistolero". Ny tantaram-pitiavan'i Luis Suarez momba ny tantaram-pahaterahana sy ny tantaran'ny tantaram-piainana tsy fantatra dia mitondra fitantarana feno momba ireo zava-nitranga voamarikao nanomboka tamin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny famakafakana dia ny tantaram-pianakaviana, ny tantaram-piainana talohan'ny laza, ny fiantsoana ny tantara, ny fifandraisana ary ny fiainana manokana.
Eny, samy mahafantatra avokoa izy rehetra fa mpilalao elit eo an-dalam-pandrosoana manerantany. Na izany aza, vitsivitsy ihany no mandinika ny tantaran'i Luis Suarez izay tena mahaliana. Ankehitriny tsy misy ado, alefaso.
Luis Suarez tantaram-pitiavana bebe kokoa momba ny tantaram-pitiavana Facts- Voalohandohan'ny fiainana
Manomboka, Luis Alberto Suárez Díaz dia teraka tamin'ny Andro 24 tamin'ny 1987 ao Salto any Orogoay. Izy no fahaefatra tamin'ireo zaza fito nateraky ny reny, Sandra Suárez sy ny rainy, Rodolfo Suárez (miaramila taloha sy mpilalao baolina taloha).
Mikasika ny fiaviany sy ny foko ny Suarez, dia firenena Nosy Orogoaiana mifangaro volon-koditra miaraka amin'ny fakan'ny Afrikana, Espaniola ary Orogoay. Ny rakitsoratra ihany koa dia manondro fa nanana dadabe mainty izy. Nihalehibe tao amin'ny manodidina an'i Cerro, any Salto, miaraka amin'ireo rahalahiny 7, fa tsy rahavavy iray ihany, Suarez dia nanana traikefa nahantra teo aloha, saingy niaina fiainana sambatra niaraka tamin'ny fianakaviany ambany kokoa ary feno fiadanana tao an-tanàna.
Tanora sy sambatra Luis Suarez tao amin'ny tanàna nahaterahany Salto. nahazoan-dalana: Pinterest.
Tahaka ny ankamaroan'ireo ankizy tamin'ny taonany tamin'izany, Suarez dia voasintona tamin'ny baolina kitra izay nilalao niaraka tamin'ireo namany tamin'ny fotoana nahafinaritra azy tao amin'ny ekipa ao an-toerana, Sportivo Artiga.
Luis Suarez (Rising Middle) ao amin'ny Sportivo Artiga. nahazoan-dalana: FPCP
Fotoana fohy taorian 'ny nipetrahan'i Suarez ny fianakaviany tao Montevideo renivohitra' Uruguay 'taorian'ny nanamafisany ny asa tao amin'ny orinasa El Trigal biscuit tao Montevideo. Ny taona 7 taona dia tsy naniry ny hiditra ny fianakaviana ary vokatr'izany dia nijanona tany Salto niaraka tamin'ny renibeny be fitiavana, Mr Da Da Rosa nandritra ny iray volana.
Luis Suarez ary namana miaraka amin'ny Grand Mum. nahazoan-dalana: Ny masoandro.
Suarez taty aoriana dia tsy nanana safidy afa-tsy ny hanatevin-daharana ny sisa amin'ny fianakaviany taorian'ny nanamafisan'ny reniny ny asa fanadiovana tao amin'ny seranam-piaramanidina bus an'ny Montevideo antsoina hoe Tres Cruces.
Luis Suarez tantaram-pitiavana bebe kokoa momba ny tantaram-pitiavana Facts- Asa fanorenana
Suarez dia niaina niaraka tamin'ny fianakaviany tao amin'ny tanànan'i La Commercial tao Montevideo ary nianatra tao amin'ny Sekoly No171 tao amin'ny manodidina an'i Tres Cruces.
Luis Suarez any amin'ny Sekoly No171 ao Tres Cruces. nahazoan-dalana: Daily Mail.
Tao Montevideo dia nangataka ilay zazalahy kely mahafinaritra nangataka ny hisoratra anarana ao amin'ny Urreta FC ao La Blanqueada, fangatahana nataon'ilay tanora 8 taona, na inona na inona zava-nitranga tao amin'ny Tres Cruces ny asany. Ny fampandrosoana dia nanaporofo fa ny tanora Suarez dia tsy natoky fotsiny ny fahaiza-manaony baolina kitra saingy vonona ny hanorina azy eo amin'ny tontolo mpifaninana. Na izany aza, dia nanana fotoana sarotra tamin'ny fanovana ny fomba fiaina tao an-tanàna izy.
".. Tonga tany amin'ny tanàna iray izay tsy nahafahantsika nilalao an-tsokosoko teny an-tsaha, niresaka ihany koa izy ireo ary mazava ho azy fa matetika no nahafinaritra ahy. Saingy tsy maintsy nampiasa izany rehetra izany araka izay vitako aho. " Nampiseho an'i Suarez tao amin'ilay boky Vamos Que Vamos.
Raha niady tamin'ny fampifanarahana i Suarez, dia nokapohina mafy ny fisaraham-panambadiana nataon'ny ray aman-dreniny raha vao 9 taona izy. Ny fampiroboroboana dia 4 taona taty aoriana (fony izy antitra 15) dia nahita azy naka ny asa hafahafa nanafotra ny araben'i Orogoay mba hanampy amin'ny fanangonam-bola ho an'ny fianakaviany izay tsy manana ray intsony.
Luis Suarez Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra intsony momba ny tantaram- Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana
Na izany aza, nanohy nilalao an'i Urreta FC i Suarez ary tsy ela taorian'izay, nisarika ny sain'ny mpikaroka, Wilson Pírez izay nanome azy fahafahana hanangana asa matihanina amin'ny baolina kitra ao amin'ny ekipan'ny tanora Nacional.
Luis Suarez ao amin'ny ekipan'ny tanora Nacional. nahazoan-dalana: Liverpool Echo.
Na izany aza, dia nihalehibe i Suarez ka lasa zatovo kamboty tsy manana fifantohana, nanomboka nisotro sy nitandrina ny orinasa ratsy. Maro be ny fiheverany fa tsy nahazo fampiroboroboana ny ekipa fahafito nasionalin'i Nacional ary niatrika ny famotsorana azo atao.
"... Avy amin'ny 12-14, nandalo fotoan-tsarotra izay tsy nahasarika ahy ny baolina kitra ary tsy te-hianatra aho. Tsy tiako ny mampiofana. Tiako ny milalao ny lalao ary toy izany dia ho sarotra be amiko ny hanatratra zavatra. Tena tezitra aho. Mpikomy aho ary niasa tamiko. " Suarez ao amin'ny boky Vamos Que Vamos.
Luis Suarez Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra intsony momba ny tantaram- Road To Fame
I Wilson Pírez (izay nitondra an'i Suarez ho an'ny ekipan'ny tanora Nacional) dia tonga tany amin'ny famonjena an'i Suarez tamin'ny fanomezana azy fahafahana iray hafa hanangona ny asany ary hanaporofo ny tenany ao amin'ny klioba. Nanararaotra ny fahafahana i Young Suarez ary nanao fihetsiketsehana taorian'ny fahatsapany fa afaka manampy ny fianakaviany amin'ny hoavy izy ary mahazo baolina kitra baolina kitra raha mijanona amin'ny baolina kitra.
"Nieritreritra ny fianakaviako, ry rahalahiko, ary nanapa-kevitra aho fa hanampy azy ireo raha handeha lavitra loatra amin'ny baolina kitra aho ... tsy maintsy miara-miasa aminy aho ... Nijery ireo mpilalao maromaro ihany koa aho izay niofana tamin'ny fiofanana boots and thought; 'Raha tianao ny fialan-tsasatra izay tsy maintsy anananao' Suarez ao amin'ny boky Vamos Que Vamos.
Luis Suarez Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra intsony momba ny tantaram- Mitsangàna mba haka izany
Izany no nahatonga an'i Suarez nihazo ny laharana Nacional sy 2005, nanampy ny andaniny handresena ny ligy 2005-06 Orogoay tamin'ny tanjona 10 tao amin'ny lalao 27. Ny fampisehoana mahatalanjona nataony dia nahatratra azy ho any Groningen, Ajax, Liverpool ary farany Barcelone izay nanasonia azy ho £ 64.98 tapitrisa (€ 82.3 tapitrisa) ho lasa iray amin'ireo mpilalao lafo indrindra tamin'izany fotoana izany.
Luis Suarez dia nanao sonia an'i Barcelona tamin'ny 2014. nahazoan-dalana: ESPN.
Luis Suarez Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra intsony momba ny tantaram- Relationship Life
Luis Suarez dia lehilahy manambady. Mampahafantatra antsipirian-javatra momba ny tantaram-piainany sy ny fiainam-pianakaviana izahay, anisan'izany ny fomba nihaonany sy nanambadiany ny vadiny Sofia Balbi. Ho an'ny fanombohana, tsy misy ny firaketana ny fifandraisan'i Suarez teo aloha satria fantany fa miaraka amin'ny mpiara-miasa aminy amin'izao fotoana izao izy nandritra ny taona maro.
Suarez dia nihaona tamin'i Sofia Balbi fony izy zazalahy kely 15 nisedra ny hiorina tao amin'ny ekipan'ny tanora Nacional. Sofia no nanolotra an'i Suarez fanohanana, famporisihana ary nifantoka tamin'io fotoana io.
Luis Suarez dia nifandray tamin'i Sofia Balbi hatramin'ny 2002. nahazoan-dalana: Ovación.
Na dia nisaraka nandritra ny fotoana kelikely aza ny rain'ireo rajako Sofia rehefa nifindrafindra niaraka tamin'ny fianakaviany manontolo tany Espana izy ireo, dia tafaverina indray taorian'ny naharesen'i Suarez ny ray aman-drenin'i Sofia hamela azy hiaraka aminy tany Holandy raha niaraka tamin'i FC Groningen (teo anelanelan'ny 2006-2007). Ny duo no nifandray tamin'ny faran'ny ambony indrindra tamin'ny fanambadiana roa taona taty aoriana tao amin'ny 2009.
Suarez sy Sofia dia nanambady tamin'ny Martsa 2009. nahazoan-dalana: Twitter.
Ny fanambadiany dia nahazo ireo zazakely mahafatifaty telo, zanaka vavy Delfina (teraka tamin'ny volana 5 2010), Benjamin teraka (teraka tamin'ny volana septambra 26, 2013) ary koa Lauti (teraka tamin'ny 24 2010).
Luis Suarez sy ny fianakaviany. nahazoan-dalana: Instagram.
Luis Suarez Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra intsony momba ny tantaram- Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Suarez dia teraka tao amin'ny fianakaviana 9. Mampita anao zava-misy marina momba ny mpikambana ao amin'ny fianakaviany isika.
Momba ny renin'i Suarez: Ny renin'i Luis Suarez dia tsy olona hafa fa Sandra Diaz. Sandra dia toy ny ankamaroan'ny reny, akaikin'ny zanany ary manana fahatsiarovana mazava amin'ny fahazazany izy na dia mitaiza zaza hafa 6 aza. Na dia sarotra aza ny mahita an'i Suarez sy ny reniny amin'ny sary, dia izy no mpanohana lehibe indrindra azy ary efa niaro ny lalao baolina kitra taorian'ny nanamelohana azyfanamarihan-kevitra manohitra an'i Patrice Evra. Manana lehilahy vaovao koa izy izay velom-pifaliana.
Momba ny rain'i Suarez: Ny an'i Luis Suarez dia i Rodolfo Suarez. Rodolfo dia miaramila taloha ary mpilalao baolina taloha izay nilalao ho an'i Deportivo Artigas. Mifanohitra amin'ny tatitra miely patrana, tsy nandao ny zanany i Rodolfo taorian'ny nisarahany tamin'ny renin'i Suarez. Nijanona izy na dia nanomboka fifandraisana ara-panambadiana hafa niaraka tamin'ny Carolina mpiara-miasa aminy aza.
"Misy foana ny fifankatiavana eo amintsika. Mandeha miara-misakafo isika ary manana fotoana tsara. Tsy misy fahatsapana mafy eo amintsika. Fianakaviana akaiky izahay. " Hoy i Rodolfo tamin'ny Sun.
Ny an'i Luis Suarez, Rodolfo Suarez. nahazoan-dalana: The Sun.
Momba ny Sakaizan'i Suarez: Suarez dia manana rahalahy 6. Anisan'izany i Paolo, Giovana, Leticia, Luis, Maxi ary Diego. Tsy dia fantatra loatra ny momba ireo mpiray tampo aminy afa-tsy ireo zokiny indrindra Paolo izay mitendry ny klioba sport Salvador AD Isidro Metapán ankehitriny.
Paolo no lahimatoan'ny rahalahin'i Suarez. nahazoan-dalana: thefinalball.com
Luis Suarez Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra intsony momba ny tantaram- Tatitra manokana
Luis Suarez dia efa tao anatin'ny folo taona farany, ka lasa iray amin'ireo mpilalao matihanina sy mpankafy indrindra amin'ny Football. Ny maro dia maro no mahatsapa fa ny hetsika ataony dia ampahafantarin'ny traikefa niainany tamin'ny fahantrana ary ny hetsika mahatsikaiky niainan'ny zatovo. Ny mpilalao voalohany izay nianatra ny fandresena sy ny fankalazana ny fandresena dia tsy niala tamin'ny fanenjehana ilay lalana mandresy, satria tsy tia mankahala izy.
"Tamin'izaho mbola kely dia tsy te ho very mihitsy aho. From -taona fito-taona, Nanomboka nanao fifaninanana sy zavatra toy izany aho ary tsy te ho very mihitsy ". Nambarany tamin'ny Daily Mail. Ity ambany ity ny lahatsary tsy fahita firy izay nahazoana ny iray tamin'ny fifaninanana nandritra ny fahazazan'i Suarez.
Nandritra ny taona maro nodiavin'i Suarez dia nanjary zatovo ratsy fanahy izay nahatsiaro ho sahiran-tsaina tamin'ny toe-javatra nanodidina azy, indrindra fa ny fisaraham-panahin'ny ray aman-dreniny, ny olana ara-toekarena ary ny tsy fahafahany mandray baolina baolina kitra raha tena mila ny iray izy. Noho izany dia namolavola endrika malemy izy ary nanjary iray izay mandanjalanja ny fitondran-tena hanao izay zavatra tsara indrindra; handresy.
"Te handresy mihitsy aza aho rehefa milalao lalao amin'i Sofia sy ny zanako vavy. Tsy afaka manampy azy aho. " Niaiky ny Daily Mail izy.
Na dia izany aza, manana toetra malaza i Suarez dia maneho azy ho toy ny namana tsara ho an'ny maro ary koa ny vady sy ray be fitiavana. Ao amin'io hazavana io ihany, manana tato-body izay mampita ny fankasitrahany ny fianakaviana izy. Ny fialam-boly ataony dia ny milalao lalao video sy ny fandaniana fotoana miaraka amin'ny fianakaviany.
Luis Suarez Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra intsony momba ny tantaram- Lifestyle
Suarez dia tsy mpankafy ny showbiz na dia manana ny sandan'ny sandan'ny $ 70 Million aza. Tahaka izany ihany koa, ny tranon'izy ireo any Royaume-Uni sy Orogoay dia tsy mandray ny mombamomba ny mpanao gazety izay mifototra amin'ny asa aman-draharahany manodidina azy. Na izany aza, matetika izy no mitondra fiara samihafa fiara toy ny Range Rover Sports SUV, BMWs, Cadillacs ary Audis.
Suarez dia manana dikanteny samihafa ao Audis ao anaty fiara fiara. nahazoan-dalana: YallaMotor.
Luis Suarez Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra intsony momba ny tantaram- Zavatra tsy dia lehibe loatra
Suárez dia nanondro mpitsara iray nanome baiko mena azy fony izy tanora 16-taona tao amin'ny ekipan'ny tanora Nacional.
Izy no hita ho meloka tamin'ny mpilalao baolina ekipa mpanohitra intelo. Ny voalohany dia nandritra ny asany matihanina niaraka tamin'i Ajax rehefa nanitsy ny PSV izy Otman Bakka. Ireo tra-boina manaraka dia i Chelsea Player, Branislav Ivanović raha niaraka tamin'i Liverpool sy i Suarez niaraka tamin'ny mpiaro an'i Italia, Giorgio Chiellini nandritra ny mondialy 2014 FIFA ao Brezila.
Chiellini no tratran'ny tratran'i Suarez. nahazoan-dalana: Gfycat.
Raha tao Liverpool izy dia lasa mpilalao voalohany tao amin'ny History Premier League mba handraisany trompetra telo manohitra ny klioba iray any Norwich City.
Voampanga ho nanaratsy an'i Patrice Evra izy, fitsarana iray izay i Suarez dia miady mandraka androany.
Nosoloin'ny tranonkala baolina Espaniola El Gol Digital Ny fahadimy amin'ny lisitr'ireo mpilalao sarotra indrindra eran-tany dia i Suarez dia voampanga am-bavany ho mpitsongo ary nanaiky hanaisotra ilay hetsika mahatsiravina.
Suarez dia malaza amin'ny fisintonana. nahazoan-dalana: Gfycat.
Suarez dia namarana ny fahatanterahan'ny enin-taona Cristiano Ronaldo ary Lionel Messi amin'ny fandresena ny Tropikan'i Pichichi ao La Liga ao amin'ny 2016.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaram-pitiavan'i Luis Suarez momba ny tantaram-pianakaviana sy ny zava-misy tsy fantatra. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.
Orogoay Football Football
Ny tantaram-pitiavan'i Joe Gomez momba ny tantaram-pitiavam-pitiavam-bahaona tsy hita isa
Enga anie 17, 2018
Nathaniel Clyne tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa
Enga anie 12, 2018